MELES ZENAWI TARIIKHDIISA OO KOBAN | Latest News	Thursday, May 23rd, 2013	Home
MELES ZENAWI TARIIKHDIISA OO KOBAN
Aug 22, 2012 - jawaab	Aqrisatay:1095Meles Zenawi wuxuu ahaa siyaasiga ugu firfircoon ee ka soo baxa jabhadda TPLF, oo ka mid ah dhaqdhaqaaqyada hubaysan ee horkacayay halganka ka dhanka ahaa rajiimkii militaryoga ee todobaatameeyadii iyo sideetameeyadii.
Kadib xukunkii Derg-ga ee ugu dambayntii xukunka laga tuuray, wuxuu noqday madaxwaynihii ugu horeeyay ee dowlad ku meelgaar ah oo Ethiopia ay yeelatay kadibna sanadkii 1995 waxaa uu noqday ra’iisul wasaaraha dalka,iyadoo uu wixii markaa ka dambeeyay uu isagu hayay xilkan dowladeed.
Mr Meles waxaa noloshiisa calaamad ku ah xilligii dhaqdhaqa jabhadda mucaaradka, mararka qaar kala daadsanaantii iyo kala damayn la’aan keenaysay dhimashada maleeshiyada jabhadda iyo guuldarooyinka howlgallo dhowr ah.
Waxaa lagu yaqaanay in uu cayaaro kubadda tennis-ka. Ma qaadan jirin fasax nasasho,
waxaana la dhihi ahaa waligiiba ma qoslin.
Marka kaliya ee la arkay ee dhoolacadaynaya oo faraxsan waxay ahayd dabaaldegyadii millennium-ka dalka, wuxuu xirnaa labis dhaqameed dabacsan wuxuuna la dhaansi-gareeyay xaaskiisa,
maalmo ayay dadwaynuhu ka hadlayeen arrintaas.
Fur-furnaanta siyaasadeed Intii uu dalka hogaaminayay,
dalka oo ahaa wuu xirxirnaa oo si qarsoodi ah ayaa loo maamulayay ilaa tartiib tartiib uu ugu furfurmay dunida inteeda kala. Inkastoo asalkiisu uu ahaa maarkiiste hadana wuu soo dhoweeyay maalgalinta dibedda,
shirkadaha ajnabiga ah ee waawayn in ay dalka soo galaan, gaar ahaanna dhinaca beeraha iyo iyadoo dabaqyo aad u dhaadheer caasimaddda Addis Ababa laga dhisay
. Balse, waxyaabaha qaar isma badalin. Shirkadaha dowladda ama xisbigu leeyahay ayaa dhaqaalaha intiisa badan gacanta ku haya, dhulka waxaa wali iska leh ‘dadwaynaha’ oo dadka ayuu ka dhaxeeyaa, taasoo oo keenaysa in beeralaydu aysan suurtagal u ahayn in ay beero gataan ama kuwooda ay iibiyaan. Ethiopia wali bulsho ahaan waa mid la ilaaliyo,
walina waxaa ka jira nidaamka duuga ah ee Kebele, oo ah guddiyo xaafadaha ah oo maamula wax walba oo nolol maalmeedka dadka ah. In muddo ah, Mr Meles wuxuu ahaa ninka dunida laga jecel yahay, wajiga la doorbido ee Africada cusub,
waxaa lagu ammaanay sida uu xoogga u saaray horumarinta reer guuraaga ee hoosta laga soo dhiso iyo musuqa aadka u yar ee ka dhexjiray dowladiisa. Wuxuu ahaa nin leh xikmad xoog leh, hadal yaqaan codkar ah, wuxuuna ahaa oo kale saaxiib ay la soo dhoweeyay oo ka mid ahaa isbahaysiga la dagaalanka argagixisada ee Maraykanka. Xumaanshaha xiriirka reer galbeeedka Hase yeeshee, xiriirkaas ayaa xumaaday markii uu sii kordhay cadaadiska lagu hayo dadka gudaha dalka Ethiopia.
Dabalgal arxan darro ah, oo lagu qaaday mucaaradka wanaagsan intii ay socotay doorashadii sanadkii 2005. Muddo aan fogayn sharciga ka hortagga argagixisada ayaa loo adeegsaday weriyayaasha, dadka internet-ka boggaga ku leh iyo dadka kale ee dhaleeceeya dowladda. Dadaallo la doonayay wax lagu tilmaamay ku ballaarinta maamulka dowladda masaajidada, ayaa sababay in dibedbaxayaal Muslimiin ah ay isugu soo baxaan waddooyinka.
Warka dhimashada ra’iisul wasaaraha ayaa naxdin xoog leh ku noqonaysa Ethiopia- xaqiiqada ah in uu xitaa uu xanuunsan yahay ma ahayn mid laga agaa gudaha dalka Ethiopia. Waxaa su’aalo ka dhasheen cidda badali doonta Meles Zenawi oo horay maamulka isku koobay.